Ndine kodzero yekuwana veteran vashandi, ini ndiri 51 kwegore, kusunungurwa kweHurumende yeZvenyika;
Ndiani ari pakati pevashandi vehurumende federal ??? Ona 79 FZ. Mabasa? Ndapota: magweta, vatongi vehurongwa, vanachiremba, mabhizinesi, nezvimwewo. Chinhu chikuru ndechekuti munhu ane ...
Ndeipi chaiyo iyo chiratidzo chekugadzirisa mhuri inoshayiwa inorongwa? Iko mari yakawanda yeVANHU vose vemhuri (kusanganisira vana) inotorwa uye igoverwa nenhamba yevamwe vemhuri, kana chigumisiro hachikwanisi kusvika kuchidiki, ipapo mhuri ...
uye ndezvipi zvinobatsira zvechirikadzi kuHondo Yenyika Yechipiri? kusanganisira kubhadhara dzimba dzekusununguka (kana uchida iyo) Aya mazano ndeaya: - Maererano neArt. 21 ye Federal Federal "On Veterans" kune chirikadzi yevanotambudzwa ...
Vanopa chirwere chekurwara kuti vatarisire vabereki vavo here? Chirwere cherwere chinogona kupiwa kune mushandi nekuda kwehutano hwake, nekuda kwekukuvara, nekuda kwechido chekugadzirisa kurapwa, uyewo ...
Ndezvipi zvikamu zvezera rezera remakore. Zviyero zvakadini% uye zvakadini% inshuwarisi? Muscovites vachiri kuwana hukama hwevanhu hunodziviswa nechisarudzo chekutungamira kweprojekti kana iwe uri murume asina kusvika 55 ...
Ndeipi kero yefurafura yemavhareji mubhadharo muRussian Federation yekuverenga kwehushuwarisi chikamu chepenheni kubva ku1985 kusvika ku2001? MuInternet pane nzvimbo. Kubudirira. kuti uwane huwandu huwandu hwemari ye 2000-2001gg.
Ndiani akakodzera kubatsirwe rubatsiro rwemagariro evanhu? Nhai! Ndinogona kuwana rubatsiro rwakakonzerwa kana ini ndakagadzirirwa uye ndakatarisira munhu akwegura kwemakore 80? Handi ...
Ndiani anofungidzirwa kuti ari mumwe wepenser? Uye sei kuwana rugwaro rwekuti muchengeti wehurumende ari oga akasurukirwa? kubvisa kubva mubhuku reimba hakugoni kuva uchapupu hwokuti munhu ari oga ari muchengeti, muimba inogona ...
Chii chinonzi pension supplement pashure pemakore gumi nemana? Uye kummai wangu mu 80 makore 80 rubles akawedzerwa, pamwe nehomwe 1440 rubles. Vakawana kupi mari yakadai? ndiudzei sei zvakaitwa ne alimony, ...
Inobata basa mu 50 inokwanisika kune amai vemwana akaremara here? Iwe unofanirwa kunge wakanyeverwa pawakabatira mwana wako muboka "mwana akaremara" (uye, zvichida, vakakuyambira, asi wakakanganwa), ...
Paunopa kuremara kusingaperi. Kana akaremara 2 yeboka 3 gore. Pana 5-th gore. Chikamu chekuremara chinoramba chichigadziriswa mumatambudziko anotevera: 1. Murume akaremara vanhu vari pamakore makumi matanhatu nemukadzi ...
Chirikadzi yemushure mushure mekufa kwemurume wake inogona kugamuchira penheji yake yakazara? Zvingangodaro kwete. Nokuda kwezita racho, nzvimbo dzinoshandiswa kuenderera mberi, maziso, hazvisati dzagashira, dai pakanga pasina purogiramu inokosha. Uye iwe sei ...
Ndezvipi basa rekushanda kwepabonde? Nditaurire kuti ndechipi mabasa uye urongwa hwemabasa asina kubhadhara mumusha. Unofanira kuva nechibvumirano chinoreva maitiro. iyo iwe unobhadhara. Uye ...
Kubhadhara kwose uye rubatsiro kubva kune hurumende kana kukanganisa kweanopa chingwa. Huru hunoenderana nehukuru hwemari uye hukuru hwomudzidzisi. Yakabudiswa muChirongwa chePension ...
EDV neEBC. EBC (mwedzi wekubhadhara mari yemari) kubhadhara dzimba nemasangano ehurumende. EDV (mwedzi mumwe nemari kubhadhara) iwe paurema hweboka re3. E huwandu hwakazara 1447, 95 rub. Urefu hwe "social package" - ...
Kusungirira kune kliniki ini ndinoshanda mumakiriniki. Zvechokwadi unofanira kusunga panzvimbo yekugara. The ns izere nevarwere vakadaro, vanouya kuti vanyorwe, tinovaisa mumakombiyuta, vanoratidza nzvimbo yekunyora, ...
Chii chaunofanira kuita kana iwe wakarasikirwa nekambani yevanhu muscovite? chii chaifanira kuita? Kubhadhara zvakanaka? kunaani? enda uko iwe uine iyo, ivo vachakuita iwe itsva, asi kwenguva iyo ivo vachakupa pfupfu pfupi yekufamba. Zvakanaka, uya ...
Pane chirwere cheVasily Chuik chinopa kodzero yevarwi vashandi here? Wedzera murindi weVasi Pupkin kwazviri, zvino zvinhu zvichaenda zvakanaka. anopa, asi nehurukuro yemupa Honorary kana kuti ...
Mibvunzo ye83 mu database yakagadzirwa mu 0,902 masekondi.